October 2014 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 8:08:00 PM 0
Android Application Reader
Unknown at 6:18:00 PM 0
Kyaw Myo Tun at 4:14:00 PM 0
ဒါလေးကတော့ အချိန်ကို ပြသပေးမှာ
သူကို install လုပ် ပြီးတော့ widget ထဲမှာ
လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ hour . minute ရှိပါတယ် widget က hour .minute ကို
apk ကိုအလွယ်တကူဖွင့်လို့ ရအောင်ပေါ့
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 12:09:00 AM 0
Skype 6.22.81.104 For PC Offilne Installer
Maung Pauk at 8:04:00 PM 0
Skype ဟာ Communication Software တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Online ကနေ Video Call ရုပ်သံနဲ့ ဆက်သွယ်ရာမှာ ထင်ရှားပါတယ်.. အခကြေးငွေပေးပြီး Online ကနေ အခြား Online တက်မနေတဲ့ ဖုန်းကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်.. Internet Connection နည်းနည်းလေးနဲ့တောင် ဆက်သွယ်ရရှိနိုင်တဲ့ Skype ဟာ ဗားရှင်း 6.22.81.104 ထွက်လာပါပြီ.. ခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Free Version ဖြစ်ပြီး Install လုပ်နေစဉ် အင်တာနက်ချိတ်ထားစရာမလိုတဲ့ Offline Installer ဖြစ်ပါတယ်..
Home Page : http://www.skype.com/en/
Skype 6.22.81.104 For PC : 34.3 Mb
Maung Pauk at 7:57:00 PM 0
Burning Software ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 7:29:00 PM 0
PowerISO ဆိုတာ CD / DVD / BD image တွေကို ပြုလုပ်နိုင်၊ ဖြည်ထုတ်နိုင်၊ ပြင်နိုင် တဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. အချို့ PC User တွေဟာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Software တွေကို iso image ဖိုင်တွေအဖြစ် ဒီ PowerISO နဲ့ပြုလုပ်ထားတတ်ကြပြီး Click တစ်ချက်တည်းနဲ့ ဖိုင်တွေကို CD/DVD/Blue Ray Disc တွေပေါ်ကို ရေးသားပေးနိုင်ပါတယ်.. ရိုးရိုး Audio ဖိုင်တွေသာမက Rip Audio ဖိုင်တွေကိုပါ Burn ပေးနိုင်ပါသေးတယ်.. ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမှာ Windows 32bit နဲ့ 64bit အတွက် Setup ဖိုင်တွေ သီးခြားပါဝင်ပြီး Patch ကတော့ တစ်ခုတည်းနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်.. Setup ကို Run ပြီး Software Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Patch ကို Run လိုက်ပြီး Patch ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. 29.95 US ဒေါ်လာတန်တဲ့ PowerISO 6.1 Full version ဖြစ်ပြီပေါ့ခင်ဗျာ..
Home Page : http://www.poweriso.com/index.htm
PowerISO 6.1 :5.6 Mb
Facebook Official version 20.0.0.25.15.apk
Maung Pauk at 7:12:00 PM 0
အသစ်ထွက်လာ တဲ့ Facebook Official version 20.0.0.25.15 ဖြစ်ပါတယ်.. Animation Photo Comment ပုံတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး သွက်လက်လာပါတယ်.. Android 4.0 နှင့်အထက် သုံးနိုင်ပါတယ်..
Facebook 20.0.0.25.15 APK is coming with improved speed. It is faster than the previous version. You can storeavariety of items such as links, places, movies, television shows as well as music. One again, all the items that you save will not be seen by your friends unless you select the Share option. Besides3UI updates above, it has been improved for reliability and speed. But, it depends on you RAM. This app is available for all Android version. Before install it you have to check your setting. Don’t forget to check “unknown source” after download the app.
Features of Facebook 20.0.0.25.15 APK
Facebook Official version 20.0.0.25.15.apk : 25.2 Mb
Spreadtrum ဖုန်းများ ကို imei ပြန်ရေးတဲ့ Spd imei Write Tool
Maung Pauk at 5:56:00 PM 0
MMSD Forum မှာ ကိုရဲရင့်အောင် တင်ထားတဲ့ Spd imei Write Tool ဖြစ်ပါတယ်.. Spreadtrum ဖုန်းများ ကို imei ပြန်ရေးတဲ့ Tool ဖြစ်ပြီး လုပ်နည်းကတော့-
1、ရလာတဲ့ zip ကို ဖြည်ပြီး အထဲ က WriteIMEI.exe ကို ဖွင့်ပါ
2、Main IMEI and Second IMEI ကို ထည့် ပါ
3、"Write IMEI" ကို နိုက်လိုက်ပါ "Pls Connect Mobile and turn on Power supply in 30 second" ဆိုပြီး ပေါ်လာပါမယ်
5、ဖုန်း နဲ့ ကွန်ပြူတာ နဲ့ ချိတ် ပါ ။ဓာတ်ခဲ ကို ကြိုးထိုး ပြီး မှ ထည့် ပါ ။
သူ့ဘာသူ ရေးသွားပါမယ် ။
Next flag show PC connect handset successful,the tool is writing IMEI.
6、Next flag show write IMEI successful, then input next IMEI and start to write again.
Credit to Ye Yint Aung @ MMSD
Spd imei Write Tool : 2.26 Mb
Maung Pauk at 5:39:00 PM 0
ပဟေဋ္ဌိ game ကစားရတာ ဝါသနာရှင်များအတွက် SupernaturalးEvil Game
Kyaw Myo Tun at 11:44:00 AM 0
Game ဆော့တယ်ဆိုတာ အပျင်းပြေစေရန်နှင့်
မိမိဥာဏ်ကိုလေးလံမသွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ game ဆော့ရတာကောင်းပါတယ် Game က
လည်း အများအပြားရှိပါတယ် အပြီးဆုံးထိဆော့ဖူး
တဲ့Game သမားတွေလည်းရှိမှာပေါ့ ဒီလိုလူတွေ
လေးလို့ ဒါဆိုရင် ဒီ ပဟေဋ္ဌိ Game လေးကို
ဆော့ပေးပါ ဒီgame က တံခါးပေါက်ကို ဖွင့်ပေး
ရတာပါ level1 နဲ့ level2 မှာတော့ လုပ်နည်းပြသ
ထားပါတယ် level3 မှာစ၍ မပြသတော့ပါဘူး
မိမိဘာလုပ် လုပ်ဆောင်ရပါမယ် ဒါပေမယ့်
အောက်မှာ level4 ထိပြသထားတဲ့ပုံပါ
Kyaw Myo Tun at 2:51:00 PM 0
player တစ်ခုကို လိုချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ
Telenor အသုံးပြုသူများအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထာသင့်တဲ့ Application များ
Pyae Phyo (MMiTD) at 1:07:00 PM 1
Kill Shoot Game
mmitdeveloper at 11:07:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။Gameဘော်ဒါတွေတွက်အလန်းစားFirst person shooter gameလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပစ်ခိုက်ရေးဂိမ်းလေးတစ်ခုပေါ့။ကဲအောက်မှာDetailတွေကိုဖတ်ပြီးသဘောကျရင်ဒေါင်းသွားပေါ့ဗျာ:)
Apk name=Kill Shoot
mmitdeveloper at 8:03:00 AM 0
Apk name=Google Music Apk
iDevice Mobile Specification
Apple iPhone6နဲ့ iPhone6Plus အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Maung Pauk at 12:10:00 PM 0
စက်ပစ္စည်းတွေ ထွန်းကားနေတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာနည်းပညာလိုက်စားသူတွေ အတွက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက် နှစ်ရက်ဆိုတာဟာအတော်အသင့်လုံလောက်နေပါပြီ။ ကယ်(လ်)ဖိုးနီးယား က လူတွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ ပစ္စည်းသစ် မိတ်ဆက် အခမ်းအနားမှာ Apple ဟာ iPhone 6, iPhone6Plus နဲ့ Apple နာရီများကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အာရုံအားလုံးဟာပစ္စည်းသစ်များနဲ့သူတို့ရဲ့ သွင်ပြင် လက္ခဏာ၊ လုပ်ဆောင်ချက် များနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းများဆီသို့ ရောက်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိစေတဲ့ ပစ္စည်းများနဲ့ တွေ့မြင်ထိတွေ့ နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ Web တွေကို Apple Buzz တွေနဲ့ ထပ်ဖြည့်ထားတာဟာအံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနဲ့ ဘလော့များကိုကိုဖတ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာလူတွေဟာအသစ်စက်စက် iPhone 6, iPhone 6plus နဲ့ Apple လက်ပတ်နာရီတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ ထင်မြင်ချက်တွေကိုစိတ်ကြိုက် အဆင့်မြင့်မြင့် ပြောင်းလဲခဲ့ကြတယ်။
Steve Job လက်ထက်က Apple ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို ကြည့်ပါကလူအများက Apple Pay စနစ်ထက် ပိုကောင်းသောစနစ်ကိုမျှော်လင့်စောင့်စားနေခဲ့ကြသည်။ Apple Pay စနစ်ဆိုသည်မှာအသုံးပြုသူများမှ အကြွေးဝယ်ကဒ်များကို အသုံးမပြုဘဲဖုန်းများမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ application များသည်လုံခြုံမှုမရှိနိုင်ပါ။
Apple မှ ဖုန်း နှင့် တတ်ဘလက်ကြားမှ ကွာခြားချက်ကိုညှိသည့်အနေဖြင့် ယခင် ၅.၅လက်မ မှ Iphone6Plus တွင် မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားကိုပိုကြီးလာအောင် တီထွင်ခဲ့သည်။ ဈေးကွက်ထဲတွင် LG G3၊ Samsung Galaxy Note4ကဲ့သို့သောဖုန်းမျက်နှာပြင်ကြီးသည့် ဖုန်းများကြီးစိုးနေသည့် ကာလApple အနေဖြင့် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရန် နောက်ကျနေပြီဟုအချို့ကဆိုကြသည်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် Apple အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဟာ Apple ဖုန်းများရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်သာမကသူရဲ့ အသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းတွေကြောင့်လည်း Apple Brand ကိုသစ္စာစောင့်သိနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေပါဘဲ။ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးသော iPhone များဟာလူအများလက်ခံနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ အကြမ်းခံနိုင်စွမ်းအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ iPhone နဲ့ iPhone Apps များဟာAndriodဖုန်းများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲမရှိရပ်တည်နေပါတယ်။ ထို့အပြင် သူတို့ရဲ့ App များဟာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဒီဇိုင်းများလည်းရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးသော iPhone များရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များကိုယေဘုယျတွေးတောစဉ်းစားခြင်းဖြင့် ဇာတ်လမ်းအသစ်ကိုဘယ်လိုပြသမယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
သို့သော် ဖုန်း၏ ကောင်းကွက် ဆိုးကွက်များကို Online မှတစ်ဆင့် လေ့လာမည်ဆိုပါကနောက်မကျသေးပါ။ Iphone 6, Google Nexus နှင့် အခြား Android ဖုန်းများအကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါ။ ဈေးနှုန်းများ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများနှင့် သုံးစွဲသူထောက်ခံချက်များသည် ဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းများအကြောင်းသိလိုပါက Kaymu Myanmar (သို့) Kaymu Blog (သို့) GSM Arenaတို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။
All Latest SP Flash Tool
Flash Tool Firmware တွေ တင်တဲ့ Smart Phone Flash Tool ဗားရှင်းမျိုးစုံကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
*1. Flash Stock Rom*: It allows you to flash scatter based Android Stock
Rom or Custom Rom on the Android Smartphone. In short it also allows you
to downgrade or upgrade your smartphone from the current running
firmware to older or newer firmware.
*2. Format Smartphone*: With this feature you can format any Android
Smartphone running on the MediaTek Chipset. Simply load the Scatter file
and connect your smartphone to the computer and press on Format button.
*3. Flash Recovery*: Beside Flashing the complete Stock Rom or any
Custom Rom, it also enable you to flash the recovery file. For Flashing
recovery, you also need to load the Scatter file.
Android Tool IMEI null ဖြေရှင်းနည်း. Phone Application Samsung Tool
Samsung Galaxy S5(Variant) အားလုံးအတွက် EFS Partition (IMEI) Backup/Restore Tool
Maung Pauk at 12:20:00 AM 0
EFS Partition မှာ ဖုန်းရဲ့ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ IMEI, Bluetooth, Wi-Fi တို့လို Radio နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေပါဝင်ပါတယ်.. ခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ Tool ကတော့ Samsung Galaxy S5(Variant) တွေအတွက်ဖြစ်ပြီး ကောင်းနေတဲ့ Samsung Galaxy S5(Variant) တွေထဲက EFS ကို Backup လုပ်ထားကာ အခြား IMEI, Wi-Fi, Bluetooth ပျောက်နေတဲ့ Samsung Galaxy S5(Variant) တွေမှာ Restore လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
** ဖုန်းအားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေမယ်လို့ အာမ မခံပါ.. မိမိဆန္ဒအလျောက် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်.. Use this tool at your own risk **
1. ဖုန်းကတော့ Root ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်..
2. ဖုန်းမှာ USB Debugging ကို Enable လုပ်ပေးထားရပါမယ်..
3. ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာက သိပြီး ( Driver သိပြီး ) ဖြစ်ရပါမယ်..
Tool ကို အောက်ဆုံးက လင့်မှာ ဒေါင်းပါ..
1. ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ပြီး ဒေါင်းထားတဲ့ Tool ထဲက EFS.bat ကို Run ပါ..
2. LTE အတွက် Backup လုပ်ဖို့ 1 နဲ့ Restore လုပ်ဖို့2ကိုနှိပ်ပြီး Enter ခေါက်ပါ..
3. SM G900H အတွက် Backup လုပ်ဖို့3နဲ့ Restore လုပ်ဖို့4ကိုနှိပ်ပြီး Enter ခေါက်ပါ..
တစ်ခု သတိထားရမှာက Restore လုပ်မယ်ဆိုရင် -
1. LTE အတွက် Backup လုပ်ထားတဲ့ Folder ထဲက "efs.img", "nvrebuild1.bin" "nvrebuild2.bin" တို့ဟာ EFS.bat ရှိတဲ့ Folder ထဲမှာ အတူတူ ရှိနေရပါမယ်..
2. ဒီလိုပဲ SM-G900H မှာလည်း Backup လုပ်ထားတဲ့ Folder ထဲက "efs.img" ဟာ EFS.bat ရှိတဲ့ Folder ထဲမှာ အတူတူ ရှိနေရပါမယ်..
EFS Partition (IMEI) Backup/Restore Tool : 398 Kb
Android Application Unlocker
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ knock unlocker 3
Kyaw Myo Tun at 10:30:00 AM 0
ဒီ unlocker လေးကို kaungkalay
ကြိုက်ပါတယ် ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကောင်းတယ်
လိုပြောလို့ရပါတယ် ဒါက pattern lock အဖြစ်
ခတ်နိုင်ပါတယ် အဝိုင်းလေးဝိုင်းဖြင့် လော့ပုံစုံလုပ်ထားပါတယ် A ,B,C,D ပါပဲ မိမိက
လော့ကို B ငါးလုံးထားထားရင် Bနေရာကို ငါးချက်
နှိပ်ရပါမယ် အဝိုင်းက လည်း ပျောက်အောင်လုပ်ထားလို့ရတဲ့အတွက် အခြား
CoolPad Phone Application Root Tools
COOLPAD ဖုန်းအားလုံးနီးပါးကို ROOT လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ONECLICK ROOT TOOL
Coolpad ပေါင်းများစွာကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Tool ဖစ်ပါတယ်။ အခြား ဖုန်းအမျိုးအစားတော်တော်များများကိုလည်း Root နိုင်ပါတယ်.. Root Genius ဖြစ်ပြီး အရင်က ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တာပါ.. အခုတော့ Install လုပ်စရာမလိုဘဲ One-Click ပုံစံနဲ့ ထွက်လာတာပါ.. Root လုပ်နိုင်တဲ့ CoolPad တွေကတော့-
5860+ , 5010 , 5110 , 5210 , 5216D
5216S , 5219 , 5230 , 5820 , 5832
5855 , 5860 , 5860S , 5870 , 5876
5890 , 5891 , 5891S , 5899 , 5910
5930 , 5950 , 5951 , 7019 , 7019A
7230 , 7231 , 7235 , 7236 , 7260
7260+ , 7266 , 7268 , 7269 , 7290
7295 , 7296 , 7298A , 7500 , 7728
8010 , 8012 , 8013 , 8020 , 8022
8026 , 8050 , 8056 , 8060 , 8070
8070D , 8076 , 8077 , 8079 , 8085
8085Q , 8089Q , 8122 , 8150 , 8180
8185 , 8190 , 8190Q , 8295 , 8710
8720 , 8720L , 8720q , 8730 , 8736
8750 , 8809 , 8810 , 8811 , 8870
8900 , 8950 , 8970L , 9070 , 9100
9900 ,9930 , 9970 , 9120 , 9960
D530 , D539 , D5800 , E239 , N916
N930 , N950 , S116 , W706 , W706+
W708 , W711 , W713 , W721 , W770
Android ပြဿနာ နည်းလမ်းများ
Android Phone တွေရဲ့ Cannot connect to camera ဆိုတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်း
Maung Pauk at 9:20:00 PM 0
ခု ကျွန်တော်ပြောမယ့်နည်းလမ်းက ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေ မပြေတော့ မသိပါဘူး.. တွေ့မိတာလေး တင်ပေးတာပါ.. ဖုန်းတွေမှာ ( များသောအားဖြင့် Huawei ) တွေမှာ ဓါတ်ပုံရိက်ဖို့ ကင်မရာကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ Cannot connect to camera ဆိုတာကို ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်.. သူများတွေ ဘယ်လို လုပ်လဲ မသိပေမယ့် ကျွန်တော် လုပ်လိုက်တာက ဒီလိုပါ..
1. ဖုန်းရဲ့ Setting ကိုနှိပ်ပါ..
2. App Manage ကိုနှိပ်ပါ..
3. Camera ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ..
4. ပထမ Clear Cache ကိုနှိပ်ပါ..
5. နောက် Clear Data ကိုနှိပ်ပါ..
6. ပြီးရင် ဘာကိုမှ ထပ်မနှိပ်ဘဲ ဖုန်းကို Restart လုပ်လိုက်ပါ.. ပြန်တက်လာရင် ကင်မရာကို သုံးလို့ ရပါပြီ...
Facebook မှ မိမိဘယ်သူမှန်းမသိစေဘဲ chatting ပြုလုပ်နိုင်မည့် Rooms app အားထုတ်လွှင့်
Pyae Phyo (MMiTD) at 5:34:00 PM 0
အင်တာနက် စတင်အသုံးများခဲ့ကြတဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက သုံးစွဲသူများဟာ ဖိုရမ်များ၊ chat rooms များမှာ မိမိရဲ့ nick name နဲ့ ဝင်ရောက်စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုတော့ facebook က စမတ်ဖုန်းများအတွက် ယင်းကဲ့သို့ မိမိမည်သူမည်ဝါမှန်းမသိစေဘဲ စကားပြော ဆိုနိုင်မည့် Room ဆိုသော apps ကိုထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။
မိမိတို့စိတ်ဝင်စားရာ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစကား ပြောဆိုနိုင်ရန်ကိုယ်ပိုင် Room ကိုတည်ဆောက်နိုင်ကာ members များကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ စာသားများသာမက ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်များ၊ emoji icon များကိုပါတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ email နဲ့ sign up လုပ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် Facebook နဲ့ချိတ်ထားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ Rooms account ကသီးခြားစီရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့်အခြားသော room များကိုချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်ကာ status များရေးသားနိုင်မှာ လည်းဖြစ်ပါ တယ်။ လတ်တလောအနေဖြင့် iOS အတွက် သာရရှိနိုင်သေးပြီး အောက်ပါ Link မှာ apps ကိုရယူနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
mmitdeveloper at 7:56:00 AM 0
Apk name==You cam makeup apk
mmitdeveloper at 7:54:00 AM 0
Apk name==Touch Pad Apk
Apk name==App Tool Usage Apk
mmitdeveloper at 7:53:00 AM 0
Apk name===ZEDGE ringtone & wallpaper